နားလည်ရခက်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အနုပညာစံနှုန်း - JAPO Japanese News
ဂါ 14 Jan 2020, 14:00 ညနေ
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အနုပညာမှာ အနည်းငယ်ထူးခြားတာကတော့ わび wabi さびsabi လို့ခေါ်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ အနုပညာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပန်းခြံတွေမှာ ဒီလိုအရာတွေမြင်တွေ့ဖူးပါသလား?
枯山水（Karesansui）Japanese Rock Garden လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပန်းခြံတွေထဲက စတိုင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာကိုတော့ わびwabi လို့ခေါ်ပါတယ်။
わびwabi ဆိုတာက တစ်နည်းပြောရရင် “အဆင့်မမှီဘူး” “လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့ ကျေနပ်ပါတယ်” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ကပုံအတိုင်းပဲ ဟိုးယခင်က တောင်သေလို့ခေါ်ကြတဲ့ နေရာမှာ မြစ်၊ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်း လုံး၀မရှိဘဲ ကျောက်တုံးတွေကသာ စီချယ်ထားတဲ့ သဘာ၀ရှုမျှော်ခင်းကို ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ ကျောက်စရစ်တွေက ရေစီးချောင်းကို ပုံဖော်ပြီး၊ အပေါ်ကကျောက်တုံး အကြီးကြီးတွေကတော့ တောင်တွေနဲ့ ကျွန်းကို ပုံဖော်ပါတယ်။
အဲ့ဒီကျောက်တုံးကြီးတွေပေါ်မှာလည်း ရေညှိတွေ ပေါက်နေပါတယ်။
အဲ့ဒီအရာက ဟောင်းနွယ်ပြီး၊ ၀မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကို ဖော်ပြခြင်းပါပဲ။ အဲ့ဒါကိုတော့ わび လို့ခေါ်ပါတယ်။
အသေးစိပ်ကျတဲ့ လှပမှုကို ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါကိုလည်း သေသေချာချာ စဥ်းစားကြည့်ရင် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သဘာ၀လို့တောင် ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ さびရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောပြပေးမှာပါ။
အထီးကျန်ဆန်မှုတွေ၊ တိတ်ဆိတ်မှုတွေထဲကနေ စိတ်ကို အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာတွေအထိ ပို့ပေးပါတယ်။ ဒါကို さびလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဆာကူရာပန်းဟာ ပွင့်တာနဲ့တစ်ပတ်တောင်မကြာဘဲ လေထဲမှာ၀ှေ့ပျံပြီး မြေပြင်ပေါ်ကို ကြွေဆင်းသွားပါတယ်။ လှပမှုကို ခံစားလိုက်ရတဲ့ တစ်ခဏမှာ အထီးကျန်မှုတွေကို ကွယ်ပျောက်သွားစေတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ အလှအပကို ခံစားရစေပါတယ်။ အဲ့ဒါကို さび လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဆာကူရာပန်းဟာ တစ်လလုံးလုံးပွင့်လန်းပြီး၊ တစ်ပြိုင်တည်း လှကြပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့ အဲ့လောက်အထိ မထူးဆန်းတော့ဘူး မဟုတ်လား?
ဒီလို ပျံ့ကြဲနေတဲ့အလှဟာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အနုပညာထဲမှာ ပါ၀င်နေတာ သေချာပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်နေပါစေ အသက်ရှင်ရဖို့အရေး ပတ်၀န်းကျင်ကို ဒုက္ခလိုက်ပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ မိမိရဲ့ ၀မ်းဗိုက်ကို ကိုယ်တိုင်လှီးဖြတ်ပြီး အသေခံကြပါတယ်။
ဆာကူရာပန်းလေးလည်း ဒီလိုပါပဲ ခူးယူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ လှပစွာအကြွေကျခံတယ်ဆိုတာက ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက် တန်ဖိုးထားတဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။
ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ ပြီးမြောက်သွားမှာစိုးလို့ ရှောင်ပြေးတယ်ဆိုတဲ့ စဥ်းစားပုံလည်းရှိပါတယ်။
ဒါကတော့ 栃木県日光市 tochigi ခရိုင် nikko မြို့နယ်လေးမှာရှိတဲ့ 日光東照宮（にっこうとうしょうぐう）ရဲ့ အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ ၀င်ပေါက်၊ 陽明門（ようめいもん）လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဖန်တီးထားတဲ့ လက်ရာကိုကြည့်လိုက်ရင် နေ၀င်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေတဲ့အတွက်陽明門（ようめいもん）လို့နာမည်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဂိတ်ကြီးမှာရှိတဲ့ တိုင်တစ်ချောင်းဟာ အပေါ်အောက် ပြောင်းပြန်အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။ မှားသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။
မပြီးစီးစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သာ ပြီးစီးသွားမယ်ဆို နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ပျက်ဆီးဖို့ဖြစ်လာမယ်။ ဒါကြောင့် မပြီးစီးသေးတဲ့ အခြေအနေကပဲ ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး တိုင်တစ်ချောင်းကို ပြောင်းပြန်အနေအထားနဲ့ ထားလိုက်ပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီလိုပဲ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပန်းခြံတွေရဲ့ အခြေခံသဘောတရားကလည်း မပြီးစီးဘဲ တစ်ခုခုလိုအပ်နေတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံခြားပန်းခြံတွေမှာတော့ ဘယ်ညာအချိုးကျနေမှုကို ဦးစားပေးပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ အစီအစဥ်မကျတာကို သဘောကျ ကြပါတယ်။
ဘယ်ညာအချိုးကျ ညီနေမယ်ဆို ဒီနေရာက ဘယ်လိုနေရာလဲ သူ့ရဲ့ ရှု့ခင်းကဘာလဲဆိုတာကို ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို အစီအစဥ်မကျ အချိုးမကျတဲ့ အခြေအနေမှာတော့ တစ်ခုကြည့်ပြီး နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ နောက်ထပ် မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုပါ မြင်တွေ့သွားတာပါ။ ဒီလိုမျိုး အစီအစဥ်တကျမရှိဘဲ အချိုးမညီတဲ့ အခြေအနေတွေကနေ ပေးလာတဲ့ရသကို ဂျပန်လူမျိုးတွေက အနုပညာတစ်ခုအနေနဲ့ ခံစားသက်၀င် ကြပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ အနုပညာက ဘယ်အပေါ်မှာအဓိက အခြေခံလဲဆိုတာတော့ နားလည်ရခက်ပေမဲ့၊ သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့အရာကို မြင်လိုက်ရင်တော့ စာဖတ်သူတို့လည်း ခံစားမိမယ်မဟုတ်လား….?
မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေပြီးတောင်းပန်ကြတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ရှေးဟောင်းဓလေ့